အခ်စ္နဲ႔ မကင္းတဲ့ လူတိုင္းအတြက္ သိမွတ္ရန္အခ်က္မ်ား – Trend.com.mm
အခ်စ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာ၊ အခ်စ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ခံစားရတဲ့ ေ၀ဒနာ ဆုိတာေတြ ကေတာ့ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး အခ်စ္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ခံစားၾကရတာ အတူတူ ပဲျဖစ္ပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်စ္နဲ႔ မကင္းတဲ့လူတိုင္းအတြက္ အခ်စ္အေၾကာင္း သိမွတ္စရာေတြကို ေဝမၽွေပးလိုက္ပါတယ္။
၄။သူ႔အတြက္နဲ႔မ်က္ရည္မက်သင့္ဘူး ။ သူသင့္ကိုခ်စ္တာမွန္ရင္ သူ႔အတြက္နဲ႔မ်က္ရည္က်ေတာ့မယ္ဆို ရင္ သူကသင့္ရဲ့ မ်က္ရည္ကိုက်ခြင့္ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။
၅။ ၾကည္ႏူးေနတဲ့ ခ်စ္သူေတြရဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေလးဟာ ေႏြးေထြးတဲ့ အနမ္းေတြအတြက္ျဖစ္တယ္။ ရန္ျဖစ္တဲ့ ခ်စ္သူေတြရဲ့ ႏႈတ္ခမ္းကေန ထြက္လာတာကေတာ့ တေယာက္ကို တေယာက္နာက်င္ေစတဲ့ စကားေတြပါပဲ။
၆။ေပ်ာ္႐ႊင္မႈဆိုတာ တစ္ခုခုေပ်ာက္သြားလို႔ လိုက္႐ွာေနသလိုပဲဘယ္လို႐ွာ႐ွာမေ တြ႕ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေမ့သြားတဲ့အခ်ိန္မွာု ျပန္ေတြ႕သလိုေပါ့။ေပ်ာ္႐ႊင္မႈဟာ သင့္နံေဘးမွာပါ။
၇။ မ်က္ရည္စက္ရဲ့ အပူခ်ိန္ဟာ ၅၃၀℃ ျဖစ္တယ္။ အခ်စ္ရဲ့ေအးစက္မႈေၾကာင ့္ မ်က္ရည္စက္က်ခ်ိန္မွာ ၅၃℃ သာက်န္ေတာ့တယ္။
၈။ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ အလိုလိုက္ျခင္းဟာ မတူပါဘူး။ အလိုလိုက္ရင္ ဘာမွမေျပာလည္းရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်စ္မွာ အဲလိုလုပ္လို႔မရဘူး။
၉။လူ႔ဘ၀မွာ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုၿပီးစာေမးပြဲႀကီ းေလးခုမွာ ပ်မ္းမွ်ေအာင္မွသာ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ တစ္ခုထဲမွာအာ႐ံုစူးစိုက္ေနလို႔လဲဒီလူ႔ဘ၀ မွာ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
၁၀။ ငါးေလးကေျပာတယ္ သင္ငါ့ရဲ့မ်က္၀န္းထဲက မ်က္ရည္ေတြကို ေတြရမွာမဟုတ္ဘူး။ ငါးေလးက ေရထဲမွာေနလို႔ပါ။ ေရကေျပာတယ္ ငါးရဲ့မ်က္ရည္ကို ေရကခံစားရတယ္တဲ့ ငါးေလးကေရရဲ့ ရင္ထဲမွာ႐ွိလို႔တဲ့။
၁၂။တစ္မိနစ္အတြင္းမွာ လူတစ္ေယာက္ကို သိႏိုင္တယ္။ တစ္နာရီအတြင္း လူတစ္ေယာက္ကိုႏွစ္သက္ႏိုင္ တယ္။ တစ္ရက္အတြင္းမွာ သင္သူ႔ကို ခ်စ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တသက္လံုးအခ်ိန္ေတြကုန္သြား ေပမဲ့ သင္သူ႔ကို ေမ့ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။
၁၃။ သင္ဦးတည္ရာ႐ွိေနရင္ သင္ဟာဘယ္ေနရာေရာက္ေနတယ္ဆိုတာအေရ းမႀကီးပါဘူး။ ၁၄။ ဘယ္အရာမဆို အဘက္ဘက္ေသာ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ ရတယ္။
၁၆။ ေပ်္ာ႐ႊင္မႈကို ေ၀မွ်လိုက္ရင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈဟာ ႏွစ္ဆပါ။ Sorrw share is sorrow half, Joy share is Joy double.
၂၀။ ငါတို႔ေတြ အခြင့္အေရးမ႐ွိတာမဟုတ္ဘူး။ အခြင့္အေရးကမ်က္စိေ႐ွ႕မွာပ ါ။ ျပန္စဖို႔ သတၱိမ႐ွိတာပါ။
၂၃။အေ႐ွ႕ဘက္ကေနထြက္လို႔ အေနာက္ဘက္ကို ေန၀င္သြားသလို စိတ္ညစ္လဲတစ္ရက္ေပ်ာ္လဲတစ္ ရက္ ေပါ့။ တစ္ခုခုကို သင္ရင္ဆိုင္ိတဲ့အခ်ိန္မွာသင္ရင္ ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ သတၱိကမွ််တေနမယ္ဆိုရင္ သင္လဲေပ်ာ္မယ္စိတ္လဲခ်မ္းသ ာမယ္။
၂၄။ သင္ျမတ္ႏိုးတက္ရင္ သင္ပိုင္ဆိုင္ထားတာကအေကာင္းဆံုး ပါ သင္အတၱႀကီးေနမယ္ဆိုရင္ သင္ပိုင္ဆိုင္ထားတာေတာင္ဆံုး႐ႈံ းႏိုင္ပါတယ္။
၂၅။အခ်စ္မွာလိုအပ္တာ ပြင့္လင္းမႈ၊ အေခ်အတင္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ညိႈႏိႈင္းရမယ္။စိတ္တိုတဲ့အခ်ိန္ မွာ စိတ္ကို ေအးေအးထားရမယ္၊ ေပ်ာ္႐ႊင္တာေတြကို ေ၀မွ်ရမယ္။
အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာ၊ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာ ဆိုတာတွေ ကတော့ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ခံစားကြရတာ အတူတူ ပဲဖြစ်ပါမယ်။ ဒါကြောင့် အချစ်နဲ့ မကင်းတဲ့လူတိုင်းအတွက် အချစ်အကြောင်း သိမှတ်စရာတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှ မိမိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာကို သိတယ်။
၂။ မှတ်သားသင့်တာကိုမှတ်သားပြ ီး မေ့သင့်တာကိုမေ့ရမယ်။ ပြောင်းလဲနိုင်တာကို ပြောင်းလဲပြီး မပြောင်းလဲနိုင်တာကို သင်လက်ခံနိုင်ရမယ်။
၃။ မျက်ရည်စက်တွေဟာ ဝမ်းနည်းမှုကို မှတ်မှတ်ရရဖြစ်စေတယ်။
၄။သူ့အတွက်နဲ့မျက်ရည်မကျသင့်ဘူး ။ သူသင့်ကိုချစ်တာမှန်ရင် သူ့အတွက်နဲ့မျက်ရည်ကျတော့မယ်ဆို ရင် သူကသင့်ရဲ့ မျက်ရည်ကိုကျခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။
၅။ ကြည်နူးနေတဲ့ ချစ်သူတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးဟာ နွေးထွေးတဲ့ အနမ်းတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။ ရန်ဖြစ်တဲ့ ချစ်သူတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းကနေ ထွက်လာတာကတော့ တယောက်ကို တယောက်နာကျင်စေတဲ့ စကားတွေပါပဲ။
၆။ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ တစ်ခုခုပျောက်သွားလို့ လိုက်ရှာနေသလိုပဲဘယ်လိုရှာရှာမေ တွ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မေ့သွားတဲ့အချိန်မှာု ပြန်တွေ့သလိုပေါ့။ပျော်ရွှင်မှုဟာ သင့်နံဘေးမှာပါ။
၇။ မျက်ရည်စက်ရဲ့ အပူချိန်ဟာ ၅၃၀℃ ဖြစ်တယ်။ အချစ်ရဲ့အေးစက်မှုကြောင့် မျက်ရည်စက်ကျချိန်မှာ ၅၃℃ သာကျန်တော့တယ်။
၈။ ချစ်ခြင်းနဲ့ အလိုလိုက်ခြင်းဟာ မတူပါဘူး။ အလိုလိုက်ရင် ဘာမှမပြောလည်းရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချစ်မှာ အဲလိုလုပ်လို့မရဘူး။
၉။လူ့ဘဝမှာ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးဆိုပြီးစာမေးပွဲကြီ းလေးခုမှာ ပျမ်းမျှအောင်မှသာ အောင်မြင်မှာပါ။ တစ်ခုထဲမှာအာရုံစူးစိုက်နေလို့လဲဒီလူ့ဘ၀ မှာ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၁၀။ ငါးလေးကပြောတယ် သင်ငါ့ရဲ့မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်တွေကို တွေရမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါးလေးက ရေထဲမှာနေလို့ပါ။ ရေကပြောတယ် ငါးရဲ့မျက်ရည်ကို ရေကခံစားရတယ်တဲ့ ငါးလေးကရေရဲ့ ရင်ထဲမှာရှိလို့တဲ့။
၁၁။ လူ့ဘဝဆိုတာ လှပတဲ့ ပန်းလေးအသွင်နဲ့ သင့်ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကို မွေးရနံ့နဲ့ သင်းစေရမယ်။
၁၂။တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ လူတစ်ယောက်ကို သိနိုင်တယ်။ တစ်နာရီအတွင်း လူတစ်ယောက်ကိုနှစ်သက်နိုင် တယ်။ တစ်ရက်အတွင်းမှာ သင်သူ့ကို ချစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တသက်လုံးအချိန်တွေကုန်သွား ပေမဲ့ သင်သူ့ကို မေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
၁၃။ သင်ဦးတည်ရာရှိနေရင် သင်ဟာဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတာအရေ းမကြီးပါဘူး။ ၁၄။ ဘယ်အရာမဆို အဘက်ဘက်သောရှုထောင့်မှကြည့် ရတယ်။
၁၅။ ဘဝခရီးလမ်းဆိုတာ ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့သူအတွက် ခင်းထားပေးပါတယ်။
၁၆။ ပျေ်ာရွှင်မှုကို ဝေမျှလိုက်ရင် ပျော်ရွှင်မှုဟာ နှစ်ဆပါ။ Sorrw share is sorrow half, Joy share is Joy double.
၁၇။ အမြင့်ဆုံးကိုမှန်း အကောင်းဆုံးကိုကြိုးစားပြီးအဆိုးဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားပ ါ။
၁၈။ လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို အချိန်နဲ့အခွင့်အရေး ကိုရှာပါ။ မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်အတွက် ဆင်ခြေကိုတော့ ရှာပါ။
၁၉။ သိရက်နဲ့ ရူးမူးနေတာ အရက်အပြင် အချစ်ပါ။
၂၀။ ငါတို့တွေ အခွင့်အရေးမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ အခွင့်အရေးကမျက်စိရှေ့မှာပ ါ။ ပြန်စဖို့ သတ္တိမရှိတာပါ။
၂၁။ အရသာမရှိတဲ့ ရေကို ငြီးငွေ့တယ်လို့ ဘယ်သူမှမပြောသလို အေးဆေးငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘဝကို ဘယ်သူက ငြီးငွေ့မှာလဲ။
၂၂။ လိုချင်တဲ့အချစ်ကို မရရင် ရနေတဲ့အချစ်ကို သင်ချစ်မြတ်နိုးပါ။
၂၃။အရှေ့ဘက်ကနေထွက်လို့ အနောက်ဘက်ကို နေဝင်သွားသလို စိတ်ညစ်လဲတစ်ရက်ပျော်လဲတစ် ရက် ပေါ့။ တစ်ခုခုကို သင်ရင်ဆိုငိတဲ့အချိန်မှာသင်ရင် ဆိုင်နိုင်တဲ့ သတ္တိကမျှျတနေမယ်ဆိုရင် သင်လဲပျော်မယ်စိတ်လဲချမ်းသ ာမယ်။
၂၄။ သင်မြတ်နိုးတက်ရင် သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတာကအကောင်းဆုံး ပါ သင်အတ္တကြီးနေမယ်ဆိုရင် သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတာတောင်ဆုံးရှုံ းနိုင်ပါတယ်။
၂၅။အချစ်မှာလိုအပ်တာ ပွင့်လင်းမှု၊ အချေအတင်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ညှိုနှိုင်းရမယ်။စိတ်တိုတဲ့အချိန် မှာ စိတ်ကို အေးအေးထားရမယ်၊ ပျော်ရွှင်တာတွေကို ဝေမျှရမယ်။
လူတစ္ေယာက္ကို တကယ္ခ်စ္တဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားခ်က္ ၁၃ ခ်က္